रोचक Archives - ratoपिरो.com - Blog for Entertainment
अँध्यारो बनाई सारा संसार मुहार फेरि अायाै तिमी अबाेध बालकले बजाएकाे बाजा जस्तै सुख र दुखकाे समिस्श्रण बाेकि वरिपरिकाे वातावरणलाई श्रङ्गार गर्न तिम्रो पर्खाईमा बसिरहेका ती लाटाे बाेटबिरूवाहरू अनि ती पाैरखी किसानहरूलाई फेरि नयाँ...
एउटा यस्तो गाउँ जहाँ, चारैतिर मरुभूमि र बीचमा पुरै हरियाली (फोटोफिचर)…
जब हामी रेगिस्तानको बारेमा कुरा गर्छौ, तब पुरै मरुभूमि चित्र आखामा मडारिन्छ। तर यही रेगिस्तानमा एउटा यस्तो गाउँ बनाइएको छ। जहाँ चारैतिर मरुभूमि र बीचमा पुरै हरियाली नै हरियाली छाएको छ। उक्त गाउँको नाम...
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेकाे कुकुर…. तस्बिरमा हेर्नुहाेस्
ताइवानको एउटा कुकुर सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बनेको छ । विभिन्न आकर्षक स्टाइलमा फुलको पहिरनले सजिएको उक्त कुकुरले सबैको मन जितेको छ । उसकाे नाम ‘सीआवो पी’ हो । ७ वर्षीय सीआवोको मालीकले उसलाई विभिन्न खालको पहिरन...
अनौठो समाचार / मनोरन्जन
एउटा अनौठो रुख जुन जंगल जस्तै देखिन्छ !!! फोटो फिचार
प्रकृति विचित्र किसिमको छ। यहाँ अनगिन्ति जीवजन्तु तथा बोटविरुवाहरु समाहित रहेका छन्। यी मध्ये एउटा अनौठो रुख जुन जंगलजस्तै देखिन्छ। यो संसारकै सबैभन्दा धेरै चौडा भएको रुख हो। यसको फैलावट करीब १४ लाख ४...
यो दुनियामा यस्तो मेलाको आयोजना पनि गरिन्छ, जहाँ मानिसहरु केवल यौन सम्पर्क कायम गर्नका लागि मेलामा पुग्दछन् ।
मेलाको नाम आउने बित्तिकै झिलिमली, रंगिचंगी, नाचगान, पकवान आदिको झल्को आउँछ । तर यो दुनियामा यस्तो मेलाको आयोजना पनि गरिन्छ जहाँ मानिसहरु केवल यौन सम्पर्क कायम गर्नका लागि मेलामा पुग्दछन् । सुन्दैमा अनौठो लाग्ने...
विश्‍वका यस्ता ठाउँहरु छन्, जहाँ पानीमै हाट बजार लाग्छ र किनबेच पनि हुन्छ।
के तपाई अहिलेसम्म पानी तैरिएर किनेबेच गर्ने हाटबजार देख्‍नु भएको छ ? तर विश्‍वमा यस्तो प्रकारको पनि हाटबजार लाग्ने गर्दछन्। जहाँ सामान किन्न पानीमा तैरिएर जानु पर्दछ। विश्‍वका यस्ता ठाउँहरु छन् जहाँ पानीमै हाट...
अनौठो पुल, जहाँ पानीमुनिबाट गाडी र माथिबाट पानी जहाज चल्दछ !!! फोटोफिचर…
ठूला-ठूला नदी तथा तलाउहरुमा गाडी ओहोर-दोहोर गर्न बनाइने पक्की पुल कस्तो हुन्छ ? सायद तपाईंको दिमागमा एउटा चित्र आइसक्यो, ‘केही पिल्लरहरुको सहायताले नदी माथि पुल खडा भएको ।’ अब यही चित्रमा मात्रै विश्वास नगर्नुस्,...
अनौँठो र रोचक बिहे, जहाँ मृत कुमार युवकको विहे विबाहित तर मृत महिलासँग गरिन्छ । फोटोफिचर ….
विश्वमा हुने अनौठा र रोचक बिहेका बारेमा तपाईले सुन्नु भएको होला । तर यहाँ यस्तो अनौठो विबाह गरिन्छ जहाँ मृत कुमार युवकको विहे विबाहित तर मृत महिलासँग गरिन्छ । चीनको ग्रामिण भेगमा ३००० वर्षदेखि...